कोरिन्थीहरूलाई पावलको 2nd पत्र – 2माछा
घर / बाइबल / Epistles / कोरिन्थीहरूलाई पावलको 2nd पत्र
1:1 पावलले, परमेश्वरको इच्छा द्वारा येशू ख्रीष्टको एक प्रेरित, र तिमोथी, एक भाइ, कोरिन्थका छ जो परमेश्वरको चर्च, Achaia सबै भएका सबै सन्तहरू संग:
1:2 हाम्रा पिता परमेश्वर तपाईंले र प्रभु येशू ख्रीष्टको देखि ग्रेस र शान्ति.
1:3 आशिष् हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको परमेश्वर र पिता हुन, कृपाका बुबा र सबै सान्त्वनादायी परमेश्वर.
1:4 उहाँले हाम्रा सबै सङ्कष्टहरूमा Consoles, त्यसैले हामी पनि दुःखको कुनै पनि प्रकारको भएका ती कन्सोलमा सक्षम हुन सक्छ कि, जो हामी पनि परमेश्वरले यस्तो आग्रह गरे भइरहेको गर्दै सल्लाह मार्फत.
1:5 ख्रीष्टको Passion हामीलाई abounds जस्तै लागि, त्यसैले पनि, ख्रीष्टमार्फत, हाम्रो सान्त्वना प्रशस्त गर्छ.
1:6 त्यसैले, हामी कष्ट छन् भने, यसलाई आफ्नो सल्लाह र मुक्तिको लागि हो, वा हामी सान्त्वना छन् भने, यसलाई आफ्नो सान्त्वना लागि हो, वा यदि हामी यस्तो आग्रह गरे छन्, यसलाई आफ्नो सल्लाह र मुक्तिको लागि हो, जुन हामीले पनि सहन जो एउटै आवेग को धैर्य धीरज मा परिणाम.
1:7 त्यसैले तपाईं हाम्रो आशा गरे हुन सक्छ दृढ, थाह छ कि, तपाईं दुःख सहभागी छन् जस्तै, त्यसैले पनि तपाईं सान्त्वना सहभागी हुनेछ.
1:8 लागि हामी तपाईंलाई नजान्ने हुन चाहँदैनन्, भाइहरूले, हाम्रो कष्ट बारेमा, जो एशिया हामीलाई भयो. हामी उपाय परे दबाउने थिए लागि, हाम्रो बल परे, हामी थकित भए भनेर, जीवन नै पनि.
1:9 तर हामी मृत्यु प्रतिक्रिया आफूलाई भित्र थियो, हामी आफूलाई विश्वास हुनेछ भनेर छैन, तर परमेश्वरले मा, जो मृत उठ्छ.
1:10 उहाँले हामीलाई उद्धार गरेको छ, र उहाँले हामीलाई बचाव छ, ठूलो peril देखि. उहाँमा, हामी उहाँले हामीलाई उद्धार गर्न जारी हुनेछ भन्ने आशा.
1:11 र तपाईं मदत छन्, हाम्रो लागि आफ्नो प्रार्थना संग, ताकि धेरै व्यक्ति देखि, कि हामीलाई एक उपहार हो जो, धन्यवाद धेरै व्यक्ति मार्फत दिएको हुन सक्छ, किनभने हामी.
1:12 हाम्रो महिमा लागि यो छ: हाम्रो अन्तस्करणले गवाही, जो हृदयको सादगी र परमेश्वरको तिर निष्कपटता पाइन्छ. र यो सांसारिक बुद्धि छैन, तर परमेश्वरको अनुग्रहको मा, हामी यो दुनिया conversed गरेको, र तपाईं तिर थप प्रशस्त मात्रामा.
1:13 हामी भन्दा अन्य तपाईंलाई अरू केही लेख्न लागि पढ्न र बुझे के. र म तपाईंलाई बुझ्न जारी हुनेछ भन्ने आशा, पनि अन्त निम्ति.
1:14 र तपाईं हाम्रो भूमिका हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ जस्तै, हामी आफ्नो महिमा हो कि, त्यसैले पनि हाम्रो हो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको दिनका निम्ति.
1:15 र यो निर्धक्क, म ढिलो तपाईं आउन चाहन्थे, तपाईं दोस्रो अनुग्रह हुन सक्छ भनेर,
1:16 र तपाईं को माध्यम म्यासिडोनियाको पारित गर्न, र म्यासिडोनिया देखि फेरि फर्कन, र त तपाईं नेतृत्व गर्न यहूदियामा मेरो बाटो मा.
1:17 त्यसपछि, हुनत म इरादा थियो यो, म हल्कासित गरे? वा मैले विचार कुराहरू मा, मैले विचार गर्न शरीरका अनुसार, त्यहाँ हुनेछ भनेर, म संग, हो र कुनै दुवै?
1:18 तर परमेश्वरले विश्वासी छ, हाम्रो शब्द त, जो तपाईंले पहिले सेट थियो, थिएन, उहाँमा, हो र कुनै दुवै.
1:19 परमेश्वरको पुत्र लागि, जीसस क्राइष्ट, जसले हामीलाई मार्फत बीचमा प्रचार गरियो, आफैलाई र Sylvanus र तिमोथी मार्फत, थिएन हो, र कुनै; तर उहाँलाई बस हो थियो.
1:20 जो लागि प्रतिज्ञा हो परमेश्वरको हो, उहाँमा, हो. यस कारण, पनि, उहाँमार्फत: परमेश्वरको आमिन हाम्रो महिमा लागि.
1:21 ख्रीष्टमा तपाईंले हामीलाई पुष्टि गर्ने अब एक, र हामीलाई गर्ने अभिषिक्त छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ.
1:22 र उहाँले हामीलाई छाप छ, र उहाँले हाम्रो हृदयमा आत्मा को धरौटीको राखिएको छ.
1:23 तर म मेरो प्राण साक्षीको रूपमा परमेश्वरको कल, मैले तपाईंलाई दयाशील थियो, कि म कोरिन्थमा फर्कन थिएन:
1:24 हामी आफ्नो विश्वास भन्दा डोमिनियन छैन किनभने, तर किनभने हामी आफ्नो आनन्द सहायक हो. विश्वास द्वारा खडा लागि.
2:1 तर म भित्र यो निर्धारित, शोक तपाईं फेरि फर्कन छैन.
2:2 यदि म उदास बनाउन को लागि, त्यसपछि मलाई खुसी बनाउन सक्छ कि जसले छ, मलाई द्वारा उदास बनेको छ जसले बाहेकको?
2:3 अनि त, म तिमीलाई यो नै कुरा लेखे, त्यसैले म शायद कि, जब म पुग्नु, कोसँग ती लागि शोक गर्न शोक थप्न म आनन्दित गर्नुपर्छ, सबै कुरामा तपाईं विश्वस्त भएको, त्यसैले मेरो आनन्द सम्पूर्ण तपाइँको हुन सक्छ.
2:4 धेरै कष्ट र हृदयको वेदनामा साथ लागि, म धेरै आँसु तपाईंलाई यस्तो लेखे: तपाईं उदास हुनेछ छैन भनेर, तर तपाईं दान थाहा हुन सक्छ भनेर म अझ प्रचुर मात्रामा तपाईं तिर छ कि.
2:5 तर यदि जो कोहीले दुःख ल्याएको छ, उहाँले मलाई sorrowed छैन. यद्यपि, मेरो भाग को लागि, यो छ त म बोझ शायद तपाईं सबै कि.
2:6 यो rebuke यो जस्तै कसैले लागि पर्याप्त होस्, लागि यो धेरै द्वारा ल्याए गरिएको छ.
2:7 त्यसैले त, विपरीत गर्न, तपाईं थप क्षमाशील र सांत्वना हुनुपर्छ, सायद यो जस्तै कसैले अत्यधिक दुःख संग बढ्तै हुन सक्छ नत्र.
2:8 किनभने यो, म उसलाई तिर आफ्नो दान पुष्टि गर्न माग्छु.
2:9 यो यस कारण लागि थियो, पनि, म यस्तो लेखे कि, कि मलाई थाहा हुन सक्छ त, तपाईं परीक्षण गरेर, तपाईं सबै कुरामा आज्ञाकारी हुनेछ कि.
2:10 तपाईं केहि को क्षमा जसलाई जो कोहीले तर, म पनि क्षमा. अनि तेस्पछि, पनि, म क्षमा जो कोहीले, यदि म केहि क्षमा, यसलाई आफ्नो sakes लागि ख्रीष्टको व्यक्तिमा गरेको थियो,
2:11 हामी शैतानले circumvented छैन भनेर त. हामी आफ्नो मनसाय को नजान्ने छैनन् लागि.
2:12 र म त्रोआस आइपुगे थियो जब, किनभने ख्रीष्टको सुसमाचार को, र एक ढोका प्रभु मा मलाई खुलेको थियो,
2:13 म मेरो आत्मा भित्र कुनै बाँकी थियो, म तीतस पाउन सक्षम थिएन किनभने, मेरो भाइ. त्यसैले, तिनीहरूलाई बिदा भन्दै, म म्यासिडोनिया लागि बाहिर सेट.
2:14 तर धन्यवाद परमेश्वरको हुन, जो सधैं ख्रीष्ट येशूको हामीलाई विजय ल्याउँछ, र हरेक ठाउँमा हामीलाई उहाँको ज्ञान को खुशबू प्रकट गर्ने.
2:15 हामी परमेश्वरको लागि ख्रीष्टको मीठो सुगन्ध हो को लागि, सुरक्षित भइरहेका छन् गर्नेहरूलाई साथ र ती दुवै जो डरावना छन्.
2:16 एक गर्न, पक्कै पनि, को खुशबू मृत्यु मृत्यु निम्ति को छ. अन्य तर, को खुशबू जीवन निम्ति जीवन छ. र यी कुराहरूको, जो यति उपयुक्त छ?
2:17 हामी धेरै अरूलाई रुचि छैन, परमेश्वरको वचन adulterating. तर सट्टा, हामी निष्कपटता बोल्न: परमेश्वरले, परमेश्वरको सामु, र ख्रीष्टमा.
3:1 हामी आफूलाई प्रशंसा गर्न फेरि सुरु हुनु पर्छ? वा आवश्यकता मा हामी (केही रूपमा छन्) तपाईं को लागि प्रशंसा को epistles को, वा तपाईं?
3:2 तपाईं हाम्रो Epistle छन्, हाम्रो हृदयमा लेखिएको, जो ज्ञात र सबै मानिसहरू द्वारा पढ्न छ.
3:3 यो तपाईं ख्रीष्टको Epistle हुन् भनेर प्रकट गरिएको छ, हामीलाई द्वारा ministered, र तल लेखिएको, छैन मसी संग, तर जीवित परमेश्वरको आत्माले, र ढुङ्गाको पाटीमा, तर हृदयको शारीरिक पाटीमा.
3:4 र हामी यस्तो विश्वास छ, ख्रीष्टमार्फत, परमेश्वरको तिर.
3:5 यसलाई हामीले को केहि सोच्न पर्याप्त छन् कि छैन, केहि हामीलाई थियो भने. तर हाम्रो पर्याप्तता परमेश्वरको हो.
3:6 र उहाँले हामीलाई नयाँ करारका उपयुक्त सेवक बनाएको छ, छैन पत्रमा, तर आत्मामा. पत्र हत्या लागि, तर आत्मा जीवन दिन्छ.
3:7 तर यदि मृत्युको सेवा, पत्थर मा पत्र संग कुँदिएका, महिमा थियो, (यति भनेर इस्राएलका छोराहरू छैन मोशाको अनुहार टक लगाएर हेर्न सक्षम थिए, किनभने आफ्नो countenance महिमा को) तापनि यस सेवा अप्रभावी थियो,
3:8 कसरी आत्मा को सेवा ठूलो महिमा छैन हुन सक्छ?
3:9 निन्दा को सेवा महिमा छ भने लागि, त्यसैले धेरै न्याय महिमा प्रशस्त को सेवा हो.
3:10 र न त यो एक उत्कृष्ट महिमा को माध्यम द्वारा महिमा थियो, हुनत यो यसको आफ्नै तरिकामा शानदार गरिएको थियो.
3:11 यदि पनि के अस्थायी थियो यसको महिमा छ लागि, त्यसपछि के स्थायी छ अझ ठूलो महिमा छ.
3:12 त्यसैले, यस्तो आशा, हामी धेरै निर्धक्क कार्य,
3:13 र रूपमा मोशाले गरे छैन, आफ्नो अनुहार माथि पर्दा राख्दै मा, ताकि इस्राएलका छोराहरू आफ्नो अनुहार टक लगाएर छैन. यो अप्रभावी थियो,
3:14 तिनीहरूको मन लागि obtuse थिए. र, पनि यो वर्तमान दिन सम्म, धेरै नै पर्दा, पुरानो नियमका देखि अध्ययनहरू मा, लगिएको छैन रह्छ (हुनत, ख्रीष्टमा, यो लगिएको छ).
3:15 तर पनि सम्म आज, मोशा पढ्न छ, एक पर्दा अझै पनि आफ्नो हृदय भन्दा सेट गरिएको छ.
3:16 तर तिनीहरूले प्रभु रूपान्तरित हुनेछ गरिएका गर्दा, त्यसपछि पर्दा लगिएको गरिनेछ.
3:17 अब आत्मा प्रभु हो. र जहाँ प्रभुको आत्मा छ, त्यहाँ स्वतन्त्रता छ.
3:18 यद्यपि साँच्चै, हामी सबै, हामी प्रभुको अनुहार को अनावरण महिमा मा हेर्न रूपमा, एउटै छवि transfigured छन्, अर्को एक महिमा देखि. र यो प्रभुको आत्मा द्वारा गरिन्छ.
4:1 त्यसैले, हामी यो सेवा पछि, र धेरै हामी आफूलाई लागि कृपा प्राप्त गरेका छन् रूपमा, हामी अयोग्य छैनन्.
4:2 हामी dishonorable र लुकेको प्रेरित त्याग्न लागि, craftiness द्वारा हिड्ने छैन, न त परमेश्वरको वचन adulterating द्वारा. बरु, सत्यको प्रकटीकरण द्वारा, हामी परमेश्वरको सामु प्रत्येक मानिसको अन्तस्करणले आफूलाई प्रशंसा.
4:3 तर हाम्रो सुसमाचारका केही तरिका छ भने लुकाइएको, यो ती लुकेको छ जो डरावना छन्.
4:4 तिनीहरूलाई लागि जाँदा, यस उमेर को भगवान बेग्लै विश्वास को मन blinded छ, ताकि ख्रीष्टको महिमा सुसमाचारको ज्योति, परमेश्वरको छवि गर्ने छ, तिनीहरूलाई मा चमक छैन.
4:5 हामी आफूलाई बारेमा प्रचार छैन लागि, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा. हामी केवल येशूको मार्फत तपाईंको सेवक हुन्.
4:6 राम्रो लागि, जो अन्धकारमा बाहिर चमक गर्न ज्योति भन्नुभयो, हाम्रो हृदय मा एक प्रकाश shined छ, परमेश्वरको शोभा को ज्ञान उजाला गर्न, ख्रीष्ट येशूको को व्यक्तिमा.
4:7 तर हामी earthen भाँडाहरू यो धन पकड, त्यसैले उदात्त छ के परमेश्वरको शक्ति हुन सक्छ, र हामी छैन.
4:8 सबै कुरामा, हामी कष्ट सहन, तैपनि हामी वेदनामा छैनन्. हामी तोकियो छन्, तैपनि हामी गरिब छैनन्.
4:9 हामी सतावट, तैपनि हामी त्यागेर गरिएको छैन. हामी लोटेका छौं, तैपनि हामी नष्ट छैन.
4:10 हामी कहिल्यै हाम्रो शरीर मा येशूको mortification वरिपरि पूरा, भनेर येशूको जीवन पनि हाम्रो शरीर मा प्रकट हुन सक्छ.
4:11 हामी लागि जो कहिल्यै येशूको खातिर मृत्यु निम्ति भन्दा हस्तान्तरण गर्दै लाइव, भनेर येशूको जीवन पनि हाम्रो मरणशील शरीरमा प्रकट हुन सक्छ.
4:12 त्यसैले, मृत्यु हामीलाई काम छ, र जीवन तपाईंलाई काम छ.
4:13 तर हामी विश्वास नै आत्मा छ. र जस्तै लेखिएको छ, "म विश्वास, र कारण लागि म कुरा,"त्यसैले हामी पनि विश्वास, र कारण, हामी पनि बोल्न.
4:14 जो खडा एक येशूले हामीलाई येशूले पनि उठाउनु हुनेछ भनेर हामी थाह र तपाईं हामीलाई राख्नेछ लागि.
4:15 त्यसैले, सबै तिमी हो, कि अनुग्रह यति, धन्यवाद धेरै मार्फत abounding, परमेश्वरको महिमा गर्न प्रशस्त सक्छ.
4:16 यस कारण, हामी अपर्याप्त छैनन्. तर यो हाम्रो बाहिरी मानिस दूषित छ यद्यपि रूपमा छ, हाम्रो भित्री मानिस दिनको दिन देखि नविकरण बेला.
4:17 हुनत हाम्रो कष्ट छ लागि, अहिलेको समयमा, संक्षिप्त र प्रकाश, यो हामीलाई पूरा एक उदात्त अनन्त महिमा को वजन, उपाय परे.
4:18 र हामी विचार गर्दै, देखेको छन् छैन कुराहरू, तर नदेखिने कुराहरू छन्. लागि देखेको छन् भनेर कुरा अस्थायी हुन्, जबकि देखेको छैन कि कुराहरू अनन्त छन्.
5:1 हामी थाहा लागि भनेर, जब यो Habitation हाम्रो पार्थिव घर भंग छ, हामी परमेश्वरको भवन छ, एक घर हातले बनाएको छैन, स्वर्गमा अनन्त.
5:2 र पनि यो कारणले, हामी इन्कारको आवाज, स्वर्गमा हाम्रो Habitation संग माथि देखि ढाकिएको गर्न इच्छा.
5:3 हामी त ढाकिएको हो भने, त्यसपछि हामी नाङ्गो हुन फेला परेन गरिनेछ.
5:4 त्यसपछि पनि, यो बासस्थान भएका हामी बोझ अन्तर्गत इन्कारको आवाज, किनभने हामी खोसिएर नाङ्गै हुन चाहँदैनन्, बरु माथिबाट ढाकिएको गर्न, ताकि के जीवन द्वारा अवशोषित हुन सक्छ नश्वर छ.
5:5 अब हामीलाई यो धेरै कुरा पूरा गर्ने एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई आत्माको प्रतिज्ञापत्र दिइएको छ.
5:6 त्यसैले, हामी कहिल्यै विश्वस्त छन्, थाह छ कि, जबकि हामी शरीर हो, हामी प्रभुको एक तिर्थयात्रा छन्.
5:7 हामी विश्वास हालतमा हिंड्न, र दृष्टि द्वारा.
5:8 त्यसैले हामी विश्वस्त छौं, र हामी शरीर मा एक तिर्थयात्रा हुन असल इच्छा छ, प्रभु गर्न उपस्थित हुन ताकि.
5:9 र यसरी हामी सङ्घर्ष, कि अनुपस्थित वा वर्तमान, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउन.
5:10 यो आवश्यक छ को लागि हामीलाई ख्रीष्टको न्यायआसनसामु प्रकट गर्न को लागि, ताकि प्रत्येक एक शरीर को उचित कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छ, आफ्नो व्यवहार अनुसार, चाहे त्यो राम्रो वा खराब थियो.
5:11 त्यसैले, प्रभुको डर को ज्ञान भएको, हामी मानिसहरूलाई अपील, तर हामीले परमेश्वरको अघि प्रकट गर्दै. अझै म आशा, पनि, हामी आफ्नो अन्तस्करण मा प्रकट हुन सक्छ कि.
5:12 हामी आफूलाई तपाईंलाई फेरि प्रशंसा छैन, बरु हामी किनभने हामी महिमा गर्ने मौका तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दै, तपाईंले ती जो अनुहार मा महिमा सामना गर्दा, र हृदयमा.
5:13 हामी मनमा अत्यधिक छन् भने, परमेश्वरले लागि हो; तर हामी सचेत छन् भने, यो तपाईं को लागि छ.
5:14 ख्रीष्टको दान हामीलाई यस्तो आग्रह गर्छ लागि, यो विचार मा: यदि एक लागि मर्नुभयो भनेर, त्यसपछि सबै मृत्यु.
5:15 र ख्रीष्टको लागि मृत्यु, ताकि जसले बाँच्न पनि ती छैन अब आफूलाई लागि बाँच्न सक्छ, तर उहाँको लागि गर्ने तिनीहरूलाई लागि मृत्यु र जो फेरि गुलाब.
5:16 अनि त, अब देखी, हामी शरीर अनुसार कुनै एक थाहा. र हुनत हामी ख्रीष्टको शरीरका अनुसार ज्ञात छ, अहिलेसम्म अब हामी अब यो तरिकामा उहाँको थाहा.
5:17 त्यसैले जो कोहीले ख्रीष्टमा एउटा नयाँ सृष्टि हो भने, के बितिसकेका छ पुरानो छ. हेर, सबै कुरा नयाँ गरेका छन्.
5:18 तर सबै परमेश्वरको छ, जो ख्रीष्ट मार्फत आफूलाई हामीलाई मिलाप छ, र जसले हामीलाई मेलमिलाप को सेवकाईमा दिइएको छ.
5:19 पक्कै पनि परमेश्वरको ख्रीष्टमा थियो, आफूलाई संसारमा मिलाप, आफ्नो पाप तिनीहरूलाई चार्ज छैन. र उहाँले हामीलाई वचन मेलमिलाप को राखिएको छ.
5:20 त्यसैले, हामी ख्रीष्टको राजदूतको छन्, परमेश्वरले हामीलाई मार्फत exhorting छ भनेर. हामी ख्रीष्ट लागि बिन्ती: परमेश्वरको मिलाप.
5:21 परमेश्वरले उहाँलाई गरे कसले पाप थाहा थिएन हाम्रो लागि पाप हुन, हामी उहाँमा परमेश्वरको न्याय बन्न सक्छ भनेर.
6:1 तर, तपाईं एउटा मद्दत रूपमा, हामी तपाईंलाई व्यर्थमा परमेश्वरको अनुग्रहको प्राप्त गर्न सल्लाह दिन्छ.
6:2 उहाँ भन्नुहुन्छ लागि: "एक अनुकूल समयमा, म पालन; र मुक्तिको दिन, म तपाईंलाई मदत गरे। "हेर, अब अनुकूल समय छ; हेर, अब मुक्तिको दिन हो.
6:3 हामी कहिल्यै कुनै ठेस दिन सक्छ, हाम्रो सेवकाईमा disparaged छैन हुन सक्छ कि त.
6:4 तर सबै कुरामा, हामीलाई ठूलो धैर्य साथ परमेश्वरको सेवकहरूको रूपमा आफूलाई प्रदर्शनी गरौं: कष्ट मार्फत, कठिनाइ, र दुःखको;
6:5 घाउ बावजुद, कैद, र विद्रोह; मेहनत साथ, सतर्कता, र उपवास;
6:6 नैतिक शुद्धता द्वारा, ज्ञान, र धीरज; शोभा मा, पवित्र आत्मामा, र unfeigned दान मा;
6:7 सत्य वचन संग, परमेश्वरको शक्ति, र सही गर्न र बायाँ न्याय को हतियार संग;
6:8 सम्मान र अनादर मार्फत, राम्रो रिपोर्ट र खराब बावजुद, कि deceivers वा सत्य-tellers रूपमा देखेको, उपेक्षा वा स्वीकार कि;
6:9 मरिरहेका यदि र साँच्चै जीवित अझै रूपमा; यदि chastised र अझै मातहत छैन रूपमा;
6:10 उदास भने र अझै सधैं आनन्द रूपमा; खाँचोमा परेका यदि र अझै धेरै अर्थपूर्ण रूपमा; रूपमा केही भएको र सबै possessing यदि.
6:11 हाम्रो मुख तपाईं लागि खुला छ, कोरिन्थीहरूलाई; हाम्रो हृदय बढेको छ.
6:12 तपाईं हामीलाई द्वारा संकुचित छैन, तर यो तपाईं संकुचित छन् तपाईंको आफ्नो भित्री स्वयं द्वारा छ.
6:13 तर हामी त्यही recompense छ देखि, (म बोल्दै छु मेरो आफ्नै छोराहरूलाई भने), तपाईं, पनि, बढेको हुनुपर्छ.
6:14 बेग्लै विश्वास संग जुवा सहन चयन छैन. लागि कसरी न्याय गर्न सक्छन् iniquity एक सहभागीले हुन? उज्यालो को संगति कसरी अन्धकार एक सहभागीले हुन सक्छ?
6:15 र कसरी ख्रीष्टको सँगै Belial सहभागी सक्नुहुन्छ? वा के भाग अवफादार संग विश्वासी छैनन्?
6:16 र के सहमति परमेश्वरको मन्दिर मूर्तिहरूसित छैन? तपाईं जीवित परमेश्वरको मन्दिर हो को लागि, बस परमेश्वरले भनेअनुसार: "म तिनीहरूलाई वास, र म तिनीहरूलाई बीच हिंड्न हुनेछ. र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्.
6:17 किनभने यो, तपाईं आफ्नो बीचमा देखि विदा र अलग हुनुपर्छ, प्रभु भन्छन्. र के अशुद्ध छ नछोऊ.
6:18 त्यसपछि म तपाईं स्वीकार गर्नेछ. र म तपाईंलाई पिता हुनेछ, र तपाईं मलाई छोरा र छोरी हुनेछ, प्रभु सर्वशक्तिमान भन्छन्। "
7:1 त्यसैले, यी प्रतिज्ञा भइरहेको, सबैभन्दा प्रिय, हामीलाई शरीरका सबै मालिन्य देखि र आत्माको हामी आफैलाई शुद्ध गरौं, परमेश्वरको डरले पवित्रीकरण perfecting.
7:2 हामीलाई विचार. हामी कुनै एक घाइते छन्; हामी कुनै एक दूषित छ; हामी कुनै एक धोखा छ.
7:3 म आफ्नो निन्दा गर्न यसो होइन. हामी अघि तपाईं भन्नुभयो छन् लागि हाम्रो हृदयमा छन्: सँगै मर्न र सँगै बस्न.
7:4 ठूलो तपाईंलाई मेरो विश्वास छ. ठूलो तिमी माथि मेरो glorying छ. म सान्त्वना भरिएको छ. म हाम्रा सबै कष्ट भर एक superabundant आनन्द छ.
7:5 त्यसपछि, पनि, हामी म्यासिडोनिया आइपुगेका थिए जब, हाम्रो शरीरमा कुनै बाँकी थियो. बरु, हामी हरेक कष्ट भोगे: बाहिरी संघर्ष, भित्री डर.
7:6 तर परमेश्वरले, जसले नम्र Consoles, तीतस को आगमन हामीलाई सान्त्वना,
7:7 र आफ्नो आगमन द्वारा मात्र, तर पनि सान्त्वना द्वारा जो संग त्यो तिमीहरूमा सान्त्वना थियो. लागि उहाँले आफ्नो इच्छाले हामीलाई ल्याइएको, तपाईंको रूँदै, मेरो लागि आफ्नो जोस, ताकि म सबै थप आनन्दित.
7:8 हुनत म मेरा epistle तपाईंलाई उदास गरे, म पश्चात्ताप छैन. र यदि म पश्चात्ताप गरे, तर केवल एक समय को लागि, एउटै epistle तपाईं उदास गरे भनेर बुझे भएको,
7:9 अब म खुसी छु: तपाईं उदास थिए किनभने, तर तपाईं पश्चात्ताप निम्ति उदास थिए किनभने. तपाईं परमेश्वरको लागि उदास भयो लागि, तपाईं हामीलाई कुनै पनि हानि दुःख भोग्न सक्छन् भनेर छैन.
7:10 परमेश्वरको अनुसार छ कि दुःख लागि मुक्तिको निम्ति स्थिर छ जो एक पश्चात्ताप पूरा. तर संसारको छ कि दुःख मृत्यु पूरा.
7:11 त्यसैले यो नै विचार विचार, परमेश्वरको अनुसार उदास हुनुको, र के ठूलो अनुरोध यो तपाईंलाई पूरा: सहित सुरक्षा, र indignation, र डर, र इच्छा, र जोस, र vindication. सबै कुरामा, तपाईं यो शोक द्वारा uncorrupted हुन आफूलाई देखाएका छन्.
7:12 अनि त, म तिमीलाई यस्तो लेखे हुनत, यो चोट कारण जो उहाँको किनभने थियो, न त किनभने यो भोगे गर्ने उहाँको, तर हाम्रो अनुरोध प्रकट गर्न ताकि, जो हामी परमेश्वरको सामु तपाईं को लागि छ.
7:13 त्यसैले, हामी सान्त्वना गरिएको छ. तर हाम्रो सान्त्वना मा, हामी तीतस आनन्द भन्दा पनि अधिक प्रशस्त मात्रामा आनन्दित छन्, किनभने आफ्नो आत्मा तपाईं सबैबाट आराम थियो.
7:14 र यदि म बारे उहाँलाई केहि मा gloried छ, म लाज गर्न राख्नु भएको छैन. तर, हामी सत्य तिमीहरूलाई सबै कुरा बोलेको छु जस्तै, त्यसैले पनि तीतस अघि हाम्रो glorying सत्य छ.
7:15 र आफ्नो भावना अब तपाईं तिर थप प्रशस्त छन्, उहाँले तपाईं सबै को आज्ञाकारी सम्झना देखि, र तपाईंले कसरी डर र कामेको उहाँलाई प्राप्त.
7:16 म सबै कुरामा म भरोसा छ कि आनन्दित.
8:1 र त हामी तपाईंलाई ज्ञात गर्दै, भाइहरूले, म्यासेडोनिया चर्चमा दिइएको छ कि परमेश्वरको अनुग्रहको.
8:2 कष्ट को एक महान अनुभव भित्र लागि, तिनीहरूले आनन्द को एक प्रशस्त छन्, र आफ्नो अचाक्ली गरिबी आफ्नो सादगी को richness मात्र बढेको छ.
8:3 र म तिनीहरूलाई साक्षी, तिनीहरूले क्षमता अनुसार थियो के स्वीकार गर्न इच्छुक थिए, र पनि के आफ्नो क्षमता परे थियो.
8:4 तिनीहरूले हामीलाई फैलन थिए, ठूलो सल्लाह संग, को सन्तहरू छ कि अनुग्रह र सेवकाईमा को संचार लागि.
8:5 र यो हामी आशा राखेका थिए के परे छ, तिनीहरू दिनुभयो देखि, प्रभु सबै को पहिलो, र फेरि पनि हामीलाई, परमेश्वरको इच्छा मार्फत,
8:6 यति भनेर हामी तीतस बिन्ती, समान प्रकारले उहाँले थालिसकेको थियो रूपमा, उहाँले पनि यो नै अनुग्रह तपाईंलाई पूरा हुनेछ.
8:7 तर, बस सबै कुरामा रूपमा विश्वास र शब्द र ज्ञान र सबै अनुरोध मा प्रशस्त, र हामीलाई तिर आफ्नो दान मा पनि अधिक त, त्यसैले पनि यो अनुग्रह मा प्रशस्त सक्छ.
8:8 म बोल्दै छु, आज्ञा पालन गर्न. तर अरूको अनुरोध मार्फत, म आफ्नो दान को राम्रो चरित्र अनुमोदन.
8:9 लागि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह थाहा, उहाँले धनी थियो हुनत कि, उहाँले आफ्नो sakes लागि गरिब भए, आफ्नो गरिबी मार्फत ताकि, तपाईं धनी बन्न सक्छ.
8:10 र बारेमा यो, म मेरो सल्लाह. यो लागि ती लागि उपयोगी छ जो, मात्र एक वर्ष पहिले, बस कार्य गर्न थालेका थिए, वा कार्य गर्न इच्छुक हुन.
8:11 त्यसैले, साँच्चै अब, काम यो पूरा, ताकि, एउटै तरिका तपाईंको इच्छुक मन संकेत छ रूपमा, तपाईं पनि कार्य गर्न सक्छ, कि बाहिर जो तपाईं.
8:12 इच्छा संकेत गर्दा लागि, यो व्यक्तिको छ के को अनुसार प्राप्त, व्यक्तिको छैन के छैन अनुसार छैन.
8:13 र यो अरूलाई राहत पर्छ भनेर छैन, जबकि तपाईं परेशान छन्, तर त्यहाँ एउटा समानता हुनुपर्छ भन्ने.
8:14 यस वर्तमान समयमा, आफ्नो प्रशस्त आफ्नो आवश्यकता आपूर्ति गरौं, ताकि आफ्नो प्रशस्त पनि आफ्नो आवश्यकता आपूर्ति हुन सक्छ, त्यहाँ एक समानता हुन सक्छ कि क्रममा, यो लेखिएको थियो जस्तै:
8:15 "थप उहाँले धेरै छैन; र कम संग उहाँले पनि सानो छैन। "
8:16 तर धन्यवाद परमेश्वरको हुन, जो तीतस को मनमा प्रदान गरेको छ, तपाईं लागि यो नै अनुरोध.
8:17 पक्कै पनि लागि, उहाँले सल्लाह स्वीकार. तर उसले धेरै पांडित्याभिमानी थियो देखि, उसले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा तपाईं गए.
8:18 र हामी पनि उसलाई सबै चर्च भर एक भाइ जसको प्रशंसा सुसमाचारको सँगसँगै पठाएको.
8:19 अनि मात्र भनेर, तर उहाँले पनि यो अनुग्रह हाम्रो प्रवास को लागि एक साथी हुन चर्च रोजेका थियो, जो हाम्रो दृढ इच्छा हामीलाई द्वारा ministered छ, प्रभुको महिमा गर्न.
8:20 त्यसैले हामीलाई यस जोगिन गरौं, जो कोहीले नत्र हामीलाई द्वारा ministered छ कि प्रशस्त भन्दा हामीलाई disparage.
8:21 हामी राम्रो छ के को लागि प्रदान लागि, मात्र परमेश्वरको दृष्टि मा, तर पनि मानिसहरूको दृष्टि मा.
8:22 र हामी पनि तिनीहरूलाई हाम्रो भाइ संग पठाएको, प्राय धेरै विषयमा पांडित्याभिमानी हुन जसलाई हामी सिद्ध गरेका छन्. तर अब त्यहाँ ठूलो solicitousness छ, जो निकै तपाईं सुम्पिएको छ;
8:23 र चाहे त्यो तीतस सम्बन्धित, मलाई एक साथी र तपाईंलाई एक सहायक गर्ने छ, वा चाहे त्यो हाम्रो भाइहरूलाई सम्बन्धित, चर्चहरूले को प्रेरितहरूको, यसलाई ख्रीष्टको महिमा छ.
8:24 त्यसैले, चर्चहरूले को दृष्टि मा, तिनीहरूलाई आफ्नो दान को र तपाईंले हाम्रो glorying को प्रमाण देखाउन.
9:1 अब, को सन्तहरू तिर गरिन्छ कि सेवाको सम्बन्धमा, मलाई तपाईं लेख्न लागि यो आवश्यक छ.
9:2 म तिम्रो इच्छुक मन थाहा. तपाईं बारेमा म महिमा, विषयमा यस, को Macedonians गर्न. लागि Achaia पनि तयार गरिएको छ, गत वर्ष को लागि. र तपाईंको उदाहरण धेरै धेरै अरूलाई प्रेरित छ.
9:3 अब म भाइहरूलाई पठाएको, ताकि के हामीले यो कुरा खाली हुन सक्छ छैन सम्बन्धमा बारेमा महिमा, क्रम कि मा (म व्याख्या गरेका छन् रूपमा) तपाईं तयार हुन सक्छ.
9:4 अन्यथा, को Macedonians मेरो साथ आइपुग्छन् र यदि तपाईं तयार फेला, हामी (छैन तपाईं उल्लेख) यो कुरा मा लज्जित हुनेछ.
9:5 त्यसैले, प्रतिज्ञा रूपमा म यो भाइहरूलाई अग्रिम तपाईं जान र यो आशिष् तयार गर्न अनुरोध गर्न आवश्यक छलफल, र यसरी, तपाईं आशिष् रूपमा तयार हुन सक्छ, छैन एक अतिरिक्त रूपमा.
9:6 तर म यो भन्न: जसले परेको खण्डमा sows पनि परेको खण्डमा कटनी गर्नेछ. र जसले आशिष्हरू पनि आशिष् बाट कटनी गर्नेछ संग sows:
9:7 प्रत्येक एक दिने, उहाँले आफ्नो मनमा कटिबद्ध छ जस्तै, न दुःख बाहिर, न त दायित्व बाहिर. परमेश्वरको लागि खुसीसाथ दिनेलाई माया.
9:8 अनि परमेश्वरले तपाईंलाई हरेक अनुग्रह प्रशस्त गर्न सक्षम छ, ताकि, सधैं तपाईं सबै कुरामा के आवश्यक छ भइरहेको, तपाईं हरेक असल काम निम्ति प्रशस्त सक्छ,
9:9 यो लेखिएको थियो जस्तै: "उहाँले व्यापक वितरण गरेको छ, उहाँले गरिब दिइएको छ; उहाँको न्याय उमेर उमेर देखि बाँकी नै छ। "
9:10 अनि उहाँले जो छर्ने गर्न सेवक बीउ तपाईं रोटी खान प्रदान गर्नेछ, र आफ्नो सन्तान गुणा गर्नेछन्, र आफ्नो न्यायको फल वृद्धि वृद्धि हुनेछ.
9:11 त्यसैले त, सबै कुरामा सार्थक गरिएको होने, तपाईं सबै सादगी प्रशस्त सक्छ, जो हामीलाई मार्फत परमेश्वरको धन्यवाद काम गर्दछ.
9:12 यो कार्यालय को सेवा को लागि छैन केवल सन्तहरू आवश्यक छ जो आपूर्ति, तर पनि प्रभुमा धेरै thanksgivings मार्फत abounds.
9:13 अनि त, यो सेवाको प्रमाण मार्फत, तपाईं ख्रीष्टको सुसमाचार तपाईंको स्वीकार को आज्ञाकारी द्वारा परमेश्वरको महिमा, र तिनीहरूलाई र सबैलाई आफ्नो सहभागिता को सादगी द्वारा,
9:14 र तिनीहरूले तपाईंलाई लागि प्रार्थना, तपाईं बारेमा पांडित्याभिमानी हुनुको, किनभने तपाईं भित्र परमेश्वरको उत्कृष्ट अनुग्रहको.
9:15 धन्यवाद आफ्नो ineffable उपहार परमेश्वरको हुन.
10:1 तर म, पावलले, तपाईं फैलन छु, ख्रीष्टको नम्रता र नम्रता मार्फत. म हुँ, प्रदर्शनमा द्वारा, तपाईं बीच नीच, अझै म तपाईंलाई भरोसा, पनि बेला म अनुपस्थित छु.
10:2 त्यसैले म petitioning छु, नत्र म बोल्ड हुन, वर्तमान गर्दा, म हामी शरीर अनुसार हिड्ने थिए भने हामीलाई न्याय गर्ने केही व्यक्तिहरूलाई द्वारा छ मानिन्छ छु भन्ने बोल्ड निर्धक्क.
10:3 हुनत हामी शरीरमा हिंड्न लागि, हामी शरीर अनुसार लड्न छैन.
10:4 हाम्रो लडाई हतियारहरू लागि शारीरिक छैनन्, अझै अझै पनि तिनीहरूले परमेश्वरको शक्तिशाली छन्, fortifications विनाश निम्ति: हरेक सल्लाह तल tearing
10:5 कि आफै परमेश्वरको बुद्धि विपरीत extols र उचाइ, र ख्रीष्टको आज्ञाकारी को कैद मा हरेक बुद्घि प्रमुख,
10:6 र हरेक अनाज्ञाकारिताले इन्कार गर्न तयार खडा, जब तपाईंको आफ्नै आज्ञाकारी पूरा भएको छ.
10:7 कि प्रदर्शनमा संग अनुसार छन् कुराहरू विचार. जो कोहीले यी कुराहरू द्वारा उहाँले ख्रीष्ट पर्छ भनेर भरोसा भने, उहाँलाई आफूलाई भित्र यो पुनर्विचार गरौं. उहाँले ख्रीष्ट पर्छ जस्तै लागि, त्यसैले पनि हामीले.
10:8 र यदि म महिमा गर्न पनि थिए केहि हाम्रो अधिकार बारेमा थप, जो प्रभु तपाईंको नसीहत लागि हामीलाई दिइएको छ, र आफ्नो विनाश लागि, म लज्जित हुनु हुँदैन.
10:9 तर यो म epistles को माध्यम द्वारा डरा छु भने हुन गरौं.
10:10 उनि भन्छन् लागि: "उहाँको epistles, साँच्चै, गहन र बलिया हुन्छन्. तर आफ्नो शारीरिक उपस्थिति कमजोर छ, र आफ्नो बोली अधम छ। "
10:11 यो जस्तै कसैले हामी epistles मार्फत शब्द हो जो भन्ने महसुस गरौं, अनुपस्थित हुँदा: हामी धेरै काम मा नै हो, वर्तमान गर्दा.
10:12 हामी interpose वा आफूलाई प्रशंसा गर्ने केही व्यक्तिहरूलाई आफूलाई तुलना गर्न हिम्मत छैन. तर हामी आफूलाई द्वारा आफूलाई मापन, र हामी संग आफूलाई तुलना.
10:13 त्यसैले, हामी हुनेछ हाम्रो उपाय परे छैन महिमा, बरु जो परमेश्वरले हामीलाई बाहिर मापन छ सीमा को उपाय अनुसार, तपाईं पनि विस्तार जो एक उपाय.
10:14 हामी आफूलाई overextending छैन, भने हामी जहाँसम्म तपाईं सक्षम छन् रूपमा पुग्न सक्षम छन्. हामी ख्रीष्टको सुसमाचार पनि जहाँसम्म तपाईं रूपमा गएका छन् लागि.
10:15 हामी अरूको मेहनत भन्दा immeasurably glorying छैन. बरु, हामी आफ्नो बढ्दो विश्वासको आशा गर्ने पकड, त्यसैले तपाईंलाई महिमा गर्न रूपमा, हाम्रो आफ्नै सीमा अनुसार, तर प्रशस्त मात्रामा,
10:16 र तपाईं परे छन् कि ती ठाउँमा evangelize समेत ताकि, छैन अरूको उपाय महिमा गर्न, बरु ती कुरामा जो पहिले नै तयार गरिएको छ.
10:17 तर जसले Glòries, उहाँलाई प्रभु महिमा गरौं.
10:18 उहाँले छैन कसले स्वीकृत भएको छ आफूलाई commends, बरु उहाँले जसलाई परमेश्वरले commends.
2 कोरिन्थी 11
11:1 म मेरो मूर्खता एउटा सानो रकम सहन भनेर इच्छा, मेरो साथ सहन ताकि.
11:2 म तपाईं तिर डाह छु, परमेश्वरको डाह संग. र म एक पति तपाईं espoused छ, ख्रीष्टको एक स्वच्छ कुमारी रूपमा भेटी.
11:3 तर म नत्र डर छु, सर्पले आफ्नो cleverness द्वारा हराउनु हव्वालाई रूपमा, त्यसैले आफ्नो मन भ्रष्ट हुन सक्छ र ख्रीष्टमा छ जो सादगी टाढा गिर सक्छ.
11:4 जो कोहीले आएको भने अर्को ख्रीष्टको प्रचार, हामीले प्रचार गर्न एक; वा तपाईंले अर्को आत्मा प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं प्राप्त गरेका जसलाई छैन एक; वा अर्को सुसमाचारका, दिएको छैन जो गरिएको एक: के तपाईं मार्गदर्शन गर्न उहाँलाई अनुमति सक्छ.
11:5 म पनि कम ठूलो प्रेरितहरू भन्दा केही गरेको छ कि विचार को लागि.
11:6 हुनत म बोलीमा अकुशल हुन सक्छ लागि, अझै म ज्ञान त छैन. तर, सबै कुरामा, हामी तपाईंलाई प्रकट गरेका छन्.
11:7 तपाईं उच्च हुनेछ भनेर वा म humbling द्वारा एक पाप गरे? म खुलेर तपाईं परमेश्वरको सुसमाचारको प्रचार.
11:8 म अन्य चर्च देखि लिएका छन्, आफ्नो सेवाको लाभ गर्न तिनीहरूलाई देखि एक stipend प्राप्त.
11:9 र मैले तपाईंलाई र आवश्यकता हुँदा, म कुनै एक कड़ा थियो. म्यासिडोनिया आपूर्ति आए जो भाइहरू लागि जो मलाई अभाव थियो. र सबै कुरामा, म पालन गरेको छु, र म राख्नेछ, तपाईं कड़ा हुँदा.
11:10 ख्रीष्टको सत्य मलाई छ, र त्यसैले यो glorying छैन मलाई टाढा बाट Achaia को क्षेत्रहरु मा भङ्ग गरिनेछ.
11:11 किन यस्तो? किनभने म तपाईंलाई प्रेम छैन यो छ? भगवान थाह म के.
11:12 तर म के गर्दैछु, म के गर्न जारी हुनेछ, म मौका इच्छा गर्नेहरूलाई देखि मौका दिनु त सक्छ टाढा जो तिनीहरूले सक्छन् महिमा द्वारा, त्यसैले छलफल गर्न हामीलाई जस्तै हुन.
11:13 झूटा प्रेरितहरू लागि, यस्तो यी छली कामदारहरू रूपमा, तिनीहरू ख्रीष्टका प्रेरितहरू थिए भने आफूलाई प्रस्तुत गर्दै.
11:14 र कुनै आश्चर्य, पनि लागि शैतानले उहाँले ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको थिए भने आफूलाई प्रस्तुत.
11:15 त्यसैले, तिनीहरूले न्यायको सेवक थिए भने यसलाई आफ्नो सेवक आफूलाई प्रस्तुत यदि कुनै ठूलो कुरा हो, को लागि आफ्नो अन्त आफ्नो काम अनुसार हुनेछ.
11:16 म फेरि भन्न. र कुनै एक मूर्ख हुन मलाई विचार गरौं. वा, कम से कम, म मूर्ख थिए भने मलाई स्वीकार, त्यसैले म पनि एउटा सानो रकम महिमा सक्छन्.
11:17 के म भन्दै छु परमेश्वरको अनुसार भने छैन, तर मूर्खता मा भने, glorying यस विषयमा.
11:18 शरीरका अनुसार धेरै महिमा देखि, म महिमा पनि हुनेछ.
11:19 लागि खुला भएको मूर्ख स्वीकार, तिमीहरू बुद्धिमानी हुन दावी हुनत.
11:20 कसैले servitude मा तपाईं गाइड जब तपाईं यसलाई अनुमति लागि, पनि उहाँले तपाईंलाई devours यदि, उहाँले तपाईंबाट लिन्छ भने पनि, उहाँले extolled छ भने पनि, उहाँले अनुहार मा बारम्बार तपाईं प्रहार पनि.
11:21 म निरादर अनुसार बोल्न, हामी यस सन्दर्भमा कमजोर भएको थियो भने. यो कुरा मा, (म मूर्खता बोल्न) जो कोहीले dares यदि, म पनि हिम्मत.
11:22 तिनीहरूले हिब्रू छन्; त्यसैले म छु. इस्राएलीहरूले तिनीहरू; त्यसैले म छु. तिनीहरूले अब्राहामको सन्तानको छन्; त्यसैले म छु.
11:23 तिनीहरूले ख्रीष्टको सेवक हुन् (म कम बुद्धिमानी थिए भने म बोल्न); थप त्यसैले म छु: धेरै मेहनत साथ, धेरै imprisonments संग, उपाय परे घाउ संग, बारम्बार mortifications संग.
11:24 पाँच अवसरमा, म चालीस धर्काहरू प्राप्त, कम एक, यहूदीहरूले देखि.
11:25 तिन चोटी, म छडीले कुटपिट भएको थियो. एक पटक, म ढुंगाले हानेर थियो. तिन चोटी, म shipwrecked थियो. एक रात र एक दिन को लागि, म समुद्रको गहिराइमा थियो.
11:26 म बारम्बार यात्राको गरेका छन्, खतरनाक पानी मार्फत, डाँकुहरूको खतरामा, मेरो आफ्नै राष्ट्र बाट खतरा, अन्यजातिहरूको देखि खतरा, शहरमा खतरा, उजाडस्थानमा खतरा, समुद्र मा खतरामा, झूटा भाइहरू बाट खतरा,
11:27 कठिनाइ र कठिनाइहरूको, धेरै सतर्कता साथ, भोक र तिर्खा मा, बारम्बार fasts संग, चिसो र nakedness मा,
11:28 र, यी कुराहरू बाहेक, बाह्य छन् जो: सबै चर्च लागि मेरो दैनिक earnestness र अनुरोध छ.
11:29 जो कमजोर छ, र म कमजोर छैन? कसले scandalized छ, र म जलेको भइरहेको छैन छु?
11:30 यो महिमा गर्न आवश्यक छ भने, म हुनेछ मेरो कमजोरी चासोको विषय कुराहरू को महिमा.
11:31 परमेश्वर र पिता हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको, जो सधैंभरि आशीर्वाद छ, म झूट होइन थाह.
11:32 दमास्कस मा, राजा Aretas अन्तर्गत राष्ट्रको राज्यपाल, को Damascenes शहर भन्दा हेर्नुभयो, मलाई पक्रनु रूपमा त.
11:33 र, एक विन्डो मार्फत, म एक टोकरी मा पर्खाल साथ तल गरौं थियो; र त म आफ्नो हात बच.
12:1 यो आवश्यक छ भने (expedient छैन पक्कै हुनत) महिमा गर्न, त्यसपछि म अर्को प्रभु देखि दर्शन र खुलासे को भन्नेछु.
12:2 म ख्रीष्टमा एउटा मानिस थाहा, जो, चौध अधिक वर्ष पहिले (शरीर मा कि, मलाई थाहा छैन, वा शरीर बाहिर, मलाई थाहा छैन: भगवानले जानुन्), तेस्रो स्वर्गमा enraptured थियो.
12:3 र म एक निश्चित मानिस थाहा (शरीर मा कि, वा शरीर बाहिर, मलाई थाहा छैन: भगवानले जानुन्),
12:4 प्रमोदवनमा मा enraptured थियो. र उहाँले रहस्य को शब्द सुने, जो यो मानिस बोल्न लागि अनुमति छैन.
12:5 यो जस्तै कसैले तर्फबाट, म महिमा हुनेछ. तर आफैलाई तर्फबाट, म हुनेछ केहि बारेमा महिमा, मेरो रोगबिमारीले बाहेक.
12:6 लागि पनि म महिमा गर्न इच्छुक छु, म मूर्ख हुने छैन. तर म सत्य बोल्न हुनेछ. अझै म त खण्डमा के हुनेछ, जो कोहीले विचार हुन सक्छ नत्र मलाई केहि उहाँले मलाई देख्नुहुन्छ के भन्दा बढी हुन, वा उहाँले मलाई देखि सुन्नुहुन्छ के भन्दा बढी केहि.
12:7 र खुलासे को महानता नत्र मलाई महिमा गर्नुपर्छ, त्यहाँ मलाई मेरो शरीर मा एक prodding दिइएको थियो: सैतानको एउटा दूत, मलाई बारम्बार प्रहार.
12:8 किनभने यो, तीन पटक म यो म बाट टाढा लिएको हुन सक्छ कि प्रभु बिन्ती.
12:9 अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो: "मेरो अनुग्रह तपाईं को लागि पर्याप्त छ. सद्गुण लागि कमजोरी मा सिद्ध छ। "अनि यति, स्वेच्छाले म मेरो कमजोरी महिमा हुनेछ, त्यसैले ख्रीष्टको सद्गुण मलाई भित्र बस्न सक्छ.
12:10 किनभने यो, म मेरो अशक्तताले मा खुसी छु: reproaches मा, अफ्ठ्यारो मा, persecutions मा, दुःख मा, ख्रीष्टको खातिर. जब म कमजोर हुन्छु लागि, त्यसपछि म शक्तिशाली छु.
12:11 म मूर्ख भएका छन्; तिमी मलाई compelled छ. म तपाईंको प्रशंसा गरिएको छ गर्नुपर्छ. म गरिएको छ लागि जो दावी ती भन्दा कम केही प्रेरितहरूको उपाय माथि हुन, तापनि म केही हुँ.
12:12 र मेरो Apostleship को छाप तिमी माथि सेट गरिएको छ, सबै धैर्य साथ, संकेत र विचित्रता र चमत्कार संग.
12:13 के तपाईं छन् कि छ लागि जो अन्य चर्च भन्दा कम छ, म छैन बोझ तपाईं गरे कि बाहेक? मलाई यो चोट क्षमा.
12:14 हेर, यो म आउन तयार छन् तेस्रो समय छ, र अझै म तपाईंलाई बोझ हुनेछैन. म तपाईंको हो कि होइन कुराहरू खोजिरहेको छु लागि, तर तिमीहरू. र न छोराछोरी आमाबाबुले अप भण्डारण गर्नुपर्छ, तर छोराछोरीलाई लागि आमाबाबुले.
12:15 अनि त, धेरै स्वेच्छाले, म खर्च र आफ्नो प्राण खातिर आफैलाई निकास हुनेछ, तपाईं थप मायालु, कम प्रेम भइरहेको बेला.
12:16 र त यो हुन. म तपाईंलाई बोझ छैन, तर सट्टा, चतुर हुनुको, म guile द्वारा प्राप्त.
12:17 र अझै, म तपाईंलाई पठाएको जसलाई कुनै पनि को हालतमा तपाईं ठग्न गर्नुभयो?
12:18 म तीतस लागि आग्रह, र म उहाँसँग भाइ पठाइएको. तीतस तपाईं ठग्न गर्नुभयो? हामी एउटै आत्मा हिंड्न गर्नुभयो? हामी त्यही चरणमा हिंड्न भएन?
12:19 के तपाईं कहिल्यै हामी तपाईं आफूलाई व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुभएको छ? हामी परमेश्वरको दृष्टि बोल्न, ख्रीष्टमा. तर सबै कुरा, सबैभन्दा प्रिय, तपाईंको नसीहत लागि हो.
12:20 अझै म डर, नत्र सायद, जब म आइपुगेको छ, म जस्तै म चाहनुहुन्छ पाउन सक्छ, र म तपाईंलाई फेला हुन सक्छ, तपाईं चाहनुहुन्छ छैन जस्तै. सायद लागि तपाईं बीच हुन सक्छ: contention, ईर्ष्या, घृणा, dissension, detraction, फुसफुसा, आत्म-exaltation, र विद्रोह.
12:21 यदि यति, त्यसपछि, जब म आइपुगेको छ, भगवान फेरि बीच मलाई नम्र हुन सक्छ. अनि त, म पहिल्यै पाप गर्ने थुप्रै लागि शोक, र पश्चात्ताप गरेनन्, को कामवासना र व्यभिचार र समलिङ्गीहरूले भन्दा, जो तिनीहरूले प्रतिबद्ध छ.
13:1 हेर, यो म आउने छु भन्ने तेस्रो समय छ. दुई वा तीन साक्षीहरूको मुख द्वारा, हरेक शब्द खडा गर्नेछु.
13:2 म वर्तमान गर्दा प्रचार, र म अहिले गर्दा अनुपस्थित प्रचार हुनेछ, अघि पाप गर्नेहरूलाई, र सबै अरूलाई, किनभने, जब म फेरि आइपुग्छन्, मैले तपाईंलाई दयाशील छैन.
13:3 तपाईं यसलाई मलाई बोल्छ जसले ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर प्रमाण खोज्न गर्छन्, जसले तपाईंलाई साथ कमजोर छैन, तर तपाईं संग शक्तिशाली छ?
13:4 उहाँले कमजोरी मा क्रूसमा थियो हुनत लागि, अहिलेसम्म उहाँले परमेश्वरको शक्ति द्वारा बसोबास. र हो, हामी उहाँलाई कमजोर. तर हामी बीच परमेश्वरको शक्ति उसलाई बस्न पर्छ.
13:5 रूपमा आफूलाई परीक्षण तपाईं विश्वासमा छन् कि. आफूलाई जाँच्न. वा तिमीहरू ख्रीष्ट येशूको तपाईंलाई छ कि छैन भनेर थाहा छैन? तर शायद तपाईं reprobates छन्.
13:6 तर म हामी reprobates छैनन् भनेर थाहा आशा.
13:7 अब हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना तपाईं दुष्ट केही गर्नु पर्छ भनेर, हामी स्वीकृत गर्न लाग्न सक्छ कि त, तर तपाईं के हुन सक्छ भनेर के राम्रो छ, हामी reprobates जस्तै देखिन्छ भने.
13:8 हामी सत्य विरुद्ध केहि गर्न सक्दैन, तर केवल सत्य को लागि.
13:9 हामी कमजोर छन् भनेर रमाउने लागि, तपाईं बलियो हुँदा. यो हामी लागि प्रार्थना के पनि छ: तपाईंको पूर्णता.
13:10 त्यसैले, म अनुपस्थित हुँदा यी कुराहरू लेख्न, ताकि, वर्तमान गर्दा, म कठोर थप कार्य गर्न नहुन सक्छ, जो परमप्रभुले मलाई दिनुभएको छ अख्तियार अनुसार, नसीहत र विनाश लागि.
13:11 बाँकी रूपमा, भाइहरूले, आनन्दित, सिद्ध हुन, प्रोत्साहन, एउटै मन छ, शान्ति. र यति शान्ति र प्रेमको परमेश्वर तपाईंसँग हुनेछ.
13:12 पवित्र चुम्बनले एक अर्को अभिवादन. सबै सन्तहरू तपाईं अभिवादन.
13:13 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, र परमेश्वरको दान, र पवित्र आत्मा को सहभागिता तपाईं सबै हुन. Amen.